Afhayeenka Alshabaab oo hanjabaad kulul u jeediyey qurbajoogta kusoo laabanaya Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Afhayeenka Alshabaab oo hanjabaad kulul u jeediyey qurbajoogta kusoo laabanaya Muqdisho
Mareeg.com: Afhayeenka Al Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa u janabay dadka qurbo joogta ah ee dib ugu soo laabanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Cali Dheere ayaa ku eedeeyey qurbajoogta dalka kusoo laabatay iney lasoo noqdeen dhaqan xumo, dhanka kalana loo xusho in laga dhigo wasiiro iyo masuuliyiin kale ee dowladeed.
“Nimankaan dibadaha ka soo yaacaya ee aqlaaq xumada la soo baray ee la rabo in dadka lagu fasahaadiyo oo shalay Yurub eeyaha ku dhaqaaqayay, ayaa Xamar markay yimaadaan waxaa la leeyahay wasiir baad tahay, agaasime ayaad tahay, iyadoo la rabo in umadda diinteeda lagu dooriyo.” ayuu yiri afhayeenka Alshabaab.
“Meeshaan waxa ay doonayaan kama soconayaan, waxaan u sheegeynaa ineysan meeshaan ku bad-baadayn, ha noqoto madaxtooyada iyo hoteelada sida aadka ah loo ilaaliyo” ayuu yiri Afhayeenka Al Shabaab.
Afhayeenka Alshabaab, wuxuu ku hanjabay iney sii wadi doonaan beegsiga goobaha ay ku badan yihiin shaqaalaha dowladda iyo qolooyinka qurba joogta ah.
“Meeshaan malag ayaa kaga soo horeeya, Hoteel Central kaliya xitaa kuma ekaan doonto meel waliba oo ay joogaan nimankaan dayuusyada ah waan ku beegsan doonaa meel waliba ama dalka ha isaga baxaan.” ayuu ku goodiyey Sheekh Cali Dheere.
Afhayeenka Alshabaab ayaa qurba joogta ah iyo shaqaalaha dowladda ugu baaqay iney faraha kala baxaan falalka xun xun ee uu sheegay iney ku jiraan, markaasna sida uu xusay Alshabaab ka tanaasuli doonaan dilkooda.
Madaafiic maanta ku dhacay hareeraha madaxtooyada Soomaaliya
Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray amaanka iyo qaraxii Hotel Central